KUKHULA abahamba ngamagundane abavela eCambodia, eLao PDR, eMyanmar naseVietnam baya eThailand
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Imihlangano (MICE) » KUKHULA abahamba ngamagundane abavela eCambodia, eLao PDR, eMyanmar naseVietnam baya eThailand
IThailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB) - Ibhizinisi lilungisa kahle isu lalo lokumaketha eCambodia, eLao PDR, eMyanmar naseVietnam (CLMV) ngomkhankaso wamasu wokuheha abahambi abaningi beMICE abavela emazweni angomakhelwane.
Lokhu kushintshwa kwamasu kungumphumela wokusebenza okuphezulu okumangazayo kwabahambi be-CLMV MICE beya eThailand, kulandela imibukiso yemigwaqo ebhekiswe ngonyaka odlule kanye nokukhushulwa ngokubambisana nabalingani bemboni, uNkk. Nichapa Yoswee, oyiPhini likaMongameli oMkhulu we-TCEB - Ibhizinisi, kusho.
“AMABHIZINISI amagundane aqhamuka emazweni angomakhelwane akhombisa ukuqina ngendlela emangalisayo. Kulonyaka, i-TCEB - Ibhizinisi likhomba ngamasu izingxenye ezihlukile, zehlukaniswe ngemihlangano kanye nezikhuthazo (MI) nemibukiso (E), ngemicimbi yokubambisana komgwaqo kanye nokukhushulwa, ”wengeza.
TCEB - Ibhizinisi selivele liqale umbukiso walo wokuqala womgwaqo ePhnom Penh, eCambodia, likhomba abahambi be-MI ngoJanuwari. NgoFebhuwari, ukuboniswa kwemigwaqo yaseMyanmar kugxile kwi-MI & E eYangon nase-MI eMandalay. Imibukiso yomgwaqo waseVietnam egxile kwi-MI & E ihlelelwe ukuphela kukaMashi eHanoi naseHo Chi Minh City. Lokhu kuqinisa ubukhona beThailand ku-CLMV uma kuqhathaniswa nemibukiso yemigwaqo yangonyaka odlule egxile kwi-MI ku-CLMV futhi umcimbi owodwa kuphela obhekiswe ku-E eCambodia.
Izikhuthazo ezikhethekile eziqonde kubo bobabili abasebenzela i-MI kanye nezivakashi ezihwebelanayo nazo ziqhubekile kwaze kwaba kulo nyaka, ngokugxila okujulile yingxenye yemakethe, ukugcina umfutho wokukhula emakethe.
Ngokwengxenye ye-MI, lolu hlelo lubhekise kwabasebenzeli bokuhamba abathumela izihambeli ze-MI eThailand. I-TCEB - Ibhizinisi liphinde libambisane neBangkok Airways emkhankasweni omusha wokukhangisa we "Fly and Meet Double Bonus Redefined".
Inikeza amalungelo okuhlangana kanye namaqembu okukhuthaza okungenani abantu abangama-30 abavela ku-CLMV, phansi kusuka kubuncane bama-50 phambilini, abaya emicimbini noma abahlala emahhotela aqinisekisiwe eThailand MICE Venue Standard (TMVS).
Amalungelo we-TCEB afaka i-MICE Lane Service eSuvarnabhumi Airport, Meet and Greet and a Cultural Performance. IBangkok Airways ihlinzeka ngezihlalo ezincomekayo, isibonelelo semithwalo eyengeziwe kanye nokugibela kweqembu okwabelwe kuqala kanye nokugibela kuqala.
Engxenyeni ye-E, i-TCEB - Ibhizinisi lihlose abahleli bezinhloso zebhizinisi, njengezinhlangano zezokuhweba, izinhlangano zabasebenzi, abezindaba bezohwebo, kanye negumbi lezentengiselwano elifanele ukuletha izivakashi zezohwebo ezingxoxweni zebhizinisi emibukisweni yamazwe omhlaba ehlelwa eThailand minyaka yonke. Labo abaletha okungenani izivakashi eziyi-10 zokuhweba emibukisweni yamazwe omhlaba esekelwa yi-TCEB eThailand banelungelo lokuthola indawo yokuhlala engu-50% uma behlangabezana nenqubo esethwe kusengaphambili yenani lokuqokwa phakathi nomcimbi.
Isibalo sabahambi beMICE abavela emazweni amane ngo-2018 sifinyelele ku-151,087, okuwukwanda okungu-206.65% uma kuqhathaniswa nabahambi abangama-49,270 be-CLMV MICE ngo-2017. Inombolo ibifinyelela kuma-31.72% wabo bonke abafikayo bama-ASEAN MICE (476,285) baya eThailand. Kulokhu iVietnam ilinganiselwa ku-11.61% (55,306), eLao PDR 11.57% (55,125), eMyanmar 4.77% (22,733) naseCambodia 3.76% (17,923).
I-ASEAN Bangkok Bangkok Airways Business Cambodia Hanoi I-MICE Myanmar Thailand I-Thailand Convention and Exhibition Bureau Vietnam Yangon
IATA: I-2019 iqala ngenothi elihle lesidingo sabagibeli
Ezokuvakasha zizoba imboni yase-US $ 50 billion eNdiya
I-Direct-Fed Microbial Products Market - Ukukhula...
Okulindelekile kanye Nokukhula kweMakethe ye-Bean Flour 2022...